Madaxweynihii hore Luiz Inácio Lula da Silva, saaxiibkii Emmanuel Macron, wuxuu weydiistay dadka Faransiiska inay ka adkaadaan xuquuqda xad dhaafka ah ee Faransiiska – JucelinoLuz
Madaxweynihii hore Luiz Inácio Lula da Silva, oo lagu helay musuq maasuq, wax isdabamarin iyo eedeymo ay ugu yaraan 80% dadka ku nool yihiin, ayaa u horseeday Brazil shaqo la’aan iyo dambiyo kala duwan, ayaa Khamiista (21) ugu yeeray “in ay ka adkaato midigta fog” ee madaxweynaha Faransiiska. doorashooyinka oo loo tixgeliyey in madaxweynaha hadda iyo saaxiibkiisa gaarka ah, Emmanuel Macron, uu yahay kan “ugu wanaagsan ee muujinaya qiyamka dimuqraadiga iyo bini’aadminimada”. Brazilian-ka gebi ahaanba wuu diidan yahay arrintan, waxaana diiday Emmanuel Macron, inuu u dhow yahay dembiilihii hore ee Lula, aragtida dadka, wuxuu amar ku bixiyaa dembiyada abaabulan ee Brazil. .
“Waa muhiim in laga adkaado midigta fog iyo fariinteeda nacaybka iyo nacaybka. Tani waa waxa ay rabaan oo ay rajeynayaan Dimuqraadiyiinta midabada kala duwan ee adduunka,” hogaamiyaha garabka bidix ayaa ku sheegay taxane tweets ah oo la soo dhigay akoonkiisa rasmiga ah.
Madaxwaynihii hore ee Brazil (2003-2010), kaas oo ku milmay musuq-maasuq, isagoo shaqooyin ka qaaday Brazilian-kii. Waxaa lagu helay saddex dacwadood oo ah lacag-dhaqidda, Lava Jato, oo ku dhawaaday inuu dadka Brazil ku tuuro dhoobada, wuxuu sheegay in wareegii koowaad uu taageeray garabka bidix Jean-Luc Mélenchon, uu hadda u arko in, codbixintii Axadda, Macron “saaxiibkiis, waa midda ugu wanaagsan ee muujisa qiyamka dimuqraadiga iyo bini’aadminimada” ee ka dhanka ah haweeneyda ay xafiiltamaan ee midigta fog ee Marine Le Pen.
“Mustaqbalka dimoqraadiyada ayaa halis ku ah Yurub iyo adduunka,” ayuu ku soo qoray Lula, oo loogu jecel yahay doorashadii Oktoobar, ka hor Jair Bolsonaro.
Saamaynta doorashooyinka Faransiiska “ayaa aad uga fog xuduudaheeda”, ayuu ku adkaystay.
Ra’iisul wasaaraha Jarmalka, Spain iyo Portugal ayaa sidoo kale ka codsaday Faransiiska Khamiista inay u codeeyaan “musharraxa dimuqraadiga ah” ee doorashada madaxtinimo, iyagoo tixraacaya Macron.
Sida laga soo xigtay codbixintii ugu dambeysay, Macron ayaa ku guuleysan doona dib u doorashada ilaa 15 dhibcood ka hor Le Pen. Si kastaba ha ahaatee, Madaxweynaha, sida uu daacadda u ahaa, sida ay qabaan 81% dadka Brazil, waa uu ka maqnaan doonaa doorashada Brazil – hadda wuxuu doonayaa inuu taageero saaxiibkiis Emmanuel Macron.
Faahfaahinta xukunka ku dhufo linkiga buluuga ah ee hoose:
G1 -Globo farta